Budata Construction Simulator 2 APK maka Android
Budata Construction Simulator 2
Free Budata maka Android (1413.12 MB)
Budata Construction Simulator 2,
Ihe owuwu simulator 2 bụ ịme anwansị ụlọ nke ị nwere ike ịnụ ụtọ igwu egwu ma ọ bụrụ na ịchọrọ iji igwe dị iche iche dị arọ dị ka igwu ala na dozers.
Na Simulator Construction 2, egwuregwu ịme anwansị nke ị nwere ike igwu na ekwentị gị na mbadamba site na iji sistemụ arụmọrụ gam akporo, enyere anyị ohere isi ụlọ ọrụ ihe owuwu nke anyị. Anyị na -agbalị iwu ụlọ na ihe owuwu dị iche iche na America site na ịnweta nkwekọrịta na egwuregwu ahụ. Mgbe ụfọdụ anyị na -ewu ụlọ elu, na mgbe ụfọdụ anyị na -eme okporo ụzọ site nịwụsa korota.
Onye na -ewu Simulator 2 bụ otu nime egwuregwu ịme anwansị egwuregwu kacha mma ị nwere ike igwu na ngwaọrụ mkpanaka gị. Nime egwuregwu a, a na -enye anyị ohere iji ụdị ụgbọ ala ewu ewu nke ụdị Caterpillar, Liebherr, Palfinger, Bell, STILL na ATLAS mepụtara. Ụgbọ ala ndị anyị ga -eji gụnyere cranes, gwongworo ihe, shọvel, dozers na rollers.
Ka anyị na -emecha nkwekọrịta na ihe owuwu na Simulator 2, anyị nwere ike ịzụlite ụlọ ọrụ anyị wee nyochaa obodo site na ịnweta nkwekọrịta ọhụrụ. Anyị nwekwara ike ịkpọghe ụgbọ ala ọhụrụ. Enwere ụgbọ ala 36 na mkpokọta, ihe karịrị nkwekọrịta nkwekọrịta 60, ọrụ okporo ụzọ na ọrụ ndozi nime egwuregwu.
Construction Simulator 2 Ụdịdị
Nha faịlụ: 1413.12 MB
Mmepụta: astragon Entertainment GmbH